Hevitra MPANOHARIANA | Oktobra 2013
Saika hiaro ny Ceni-t aho fa nihemotra indray! #mdg2013
2013-10-29 @ 08:28 in Politika
Tamin'ny fotoana namoahan'ny ceni-t ny vokatra voalohany dia taitra ny maro maro tamin'ny mpanohana an'i Jean Louis Robinson teto Antananarivo hoe fa maninona foana no ny any amin'ny faritany no mivoaka voalohany ary mivoaka tsikelikely fa tsy mivoaka tambabe ny vokatra eto an-drenivohitra izay foiben-toeran'io rafitra mikarakara ny fifidianana eto Madagasikara io? Nanana eritreri-dratsy avy hatrany ny mpanohana ny 33 fa misy finiavana hanodikodinana ny vato avy hatrany ao. Tsy voatery ho marina avy hatrany izany eritreritra izany fa ahiahy tsy ihavanana araka ny fomba fiteny.
Dia naka fomba fijery hafa aho hoe andao hoe hojerena ny lafiny tsara amin'ny fihetsika ataon-dry zareo. Sao kosa mandanjalanja ny fomba famoaham-bokatra izy ka karazany ampifandimbiasany avoaka ny avy amin'ny vazantany efatra mba hisokatra ny valim-pifidianana ary tsy ho tafakatra ambony dia ambony tampoka ny kandidà iray dia hidina ambany tamboka ny kandidà hafa, izay mety hampisaritaka ny mpanara-baovao. Sao mba kendrena fa raha miakatra ny iray dia miakatra tsikelikely, ary raha midina indray ny isan-jatony dia midina tsikelikely fa tsy ho minifi-tsofa miaka-midina mety hanapaka lalan-drà araka ny fomba fiteny. Dia efa saika hamoaka izay hevitra izay aho hoe mba mitandrina kosa ny ceni-t ny mba tsy hisian'ny korontana eto Madagasikara, ary saika hampandreseko lahatra anareo mpamaky. Saika hanoratra aho hoe aza atao mahataitra fa ho feno amin'ny fotoanany ihany ny distrika nandresenareo dia ho voatazona eo ihany ny isan-jato. Niova hevitra aho taorian'ny fitsidihana nataon'ny lehiben'ireo hery mitam-piadiana eto Madagasikara tao amin'ny ceni-t Alarobia sy ny fitomboan'ny isan'ny mpifidy tampoka izay efa naderadera andro maromaro izay, niakatra 140 619 moa izany omaly raha nitombo 141 993 kosa afak'omaly ka naverina tamin'ny isa nanombohany avy eo.
Miteraka ahiahy tanteraka ny tsy amoahana ho hitan'ny mpiserasera intsony ny valim-pifidianana izay efa nanaovako kajikajy vendrambedrana fa ahafahana mametraka ny isanjaton'ny lah.33 ho any amin'ny 7,60% rehefa tsy omena vato intsony izy, na dia mbola tsy feno aza ny vokatra avy amin'ny distrika sy ny faritra nandresen'i Jean Louis Robinson. Io no isan-jato tokony ho ambany indrindra fa azo atao tsara ny mametraka azy ho 14% hijanona ho laharana fahatelo raha azo akarina ho 15% ihany koa ny laharana fahatelo amin'izao fotoana izao dia ho ny laharana faharoa sy ny laharana fahatelo amin'izay fotoana izao no hifanandrina amin'ny fihodinana faharoa. Fehiny: azo lalaovina tsara io isam-bato azon'ny kandidà io rehefa any amin'ny tany lavitra andriana. Manoratra izany aho miaraka amin'ny fomba fiteny hoe Ny hamisavisana ny ratsy hiavian'ny soa.
29 oktobra 2013